KENKAN WƆ Abbey Afrikaans Ahanta Aja Albanian Altai Alur America Mmum Kasa Amharic Angola Mmum Kasa Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Assamese Attié Aukan Australia Mmum Kasa Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivia Mmum Kasa Boulou Brazil Mmum Kasa Bulgaria Mmum Kasa Bulgarian Bété Cambodian Carib Catalan Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chile Mmum Kasa Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Mmum Kasa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombia Mmum Kasa Comorian (Ngazidja) Costa Rica Mmum Kasa Croatian Czech Czech Mmum Kasa Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dusun Dutch Ecuador Mmum Kasa Efik El Salvador Mmum Kasa Emberá (Catío) English (Borɔfo) Esan Estonian Ewe (Awona) Fang Faroese Fijian Finland Mmum Kasa Finnish Fon Frafra French French Mmum Kasa Ga (Nkran Kasa) Galician Garifuna Georgian German German Mmum Kasa Ghana Mmum Kasa Ghomálá’ Gitonga Gokana Greek Greek Mmum Kasa Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guatemala Mmum Kasa Guerze Gujarati Gun Guna Guéré Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Mmum Kasa Huastec (San Luis Potosi) Huichol Hungarian Hungary Mmum Kasa Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko India Mmum Kasa Indonesia Mmum Kasa Indonesian Irish Isoko Italian Italy Mmum Kasa Itawit Japan Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabuverdianu Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Khasi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kituba Kongo Korea Mmum Kasa Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lambya Laotian Lari Latgalian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Mmum Kasa Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Malaysia Mmum Kasa Maltese Mam Mambwe-Lungu Mangareva Maninkakan (Eastern) Mano Mapudungun Marathi Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mauritian Creole Maya Mayo Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Medumba Mende Meru Mfantse Mingrelian Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Motu Mozambique Mmum Kasa Myanmar Myanmar Mmum Kasa Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nahuatl (Veracruz) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nepali Mmum Kasa Netherlands Mmum kasa New Zealand Mmum Kasa Ngabere Ngangela Ngiemboon Nias Nicaragua Mmum Kasa Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nsenga Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Panama Mmum Kasa Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguay Mmum Kasa Persian Peru Mmum Kasa Philippines Mmum Kasa Pidgin (Cameroon) Pilagá Polish Pomeranian Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romania Mmum Kasa Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Russia Mmum Kasa Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sango Saramaccan Sarnami Sena Senoufo (Cebaara) Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovakia Mmum Kasa Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Susu Swahili Swahili (Congo) Swati Sweden Mmum Kasa Swedish Taabwa Tagalog Tahitian Taiwan Mmum Kasa Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai (Northeastern) Thailand Mmum Kasa Tigrinya Tiv Tlapanec Toabaite Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tyrewuju Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruguay Mmum Kasa Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuela Mmum Kasa Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xavante Xhosa Yacouba Yapese Yemba Yoruba (Alata) Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Mmum Kasa Zulu
Ana ebɛpɛ dɛ eyɛ nhwehwɛmu bi dze ma wo Bible mu nyimdzee nya nkɔenyim anaa? Ana wo ho per wo dɛ ibohu kyerɛwsɛm, onyimpa, beebi anaa adze bi a wɔakã ho asɛm wɔ Bible mu no yie? Anaa adwen ho pɛn dɛ ibia Nyankopɔn Asɛm botum aboa wo ma eenya wo haw ano edur? Sɛ dɛm dze a, kɛyɛ nhwehwɛmu wɔ Ahendzi Asa nwomakorabea hɔ.
Hɔ na yenya ndwindadze a yɛdze yɛ nhwehwɛmu. Obotum aba dɛ nnyɛ Bible ho nwoma a Jehovah Adasefo ayɛ a ɔwɔ wo kasaa mu no nyinara na ewɔ bi. Naaso wɔ Ahendzi Asa nwomakorabea hɔ no, nwoma ahorow a woetsintsim no ndaansa yi ara no bi wɔ hɔ. Ibia ibotum enya Bible nkyerɛase ahorow, nkasafua nkyerɛase nwoma a odzi mu, anaa nhwehwɛmu nwoma afofor so wɔ hɔ. Ibotum akɛyɛ nhwehwɛmu wɔ nwomakorabea hɔ ansaana wɔaahyɛ Christianfo nhyiamu ase anaa aber a wɔapon no. Sɛ kɔmpiwta so wɔ hɔ a, ibia ibotum enya Watchtower Library so wɔ do. Iyi yɛ kɔmpiwta do dwumadzi bi a hɛn asafo nwoma ahorow pii wɔ do. Ɔwɔ ɔfã bi so a ibotum abɔ asɛntsir, kasafua anaa kyerɛwsɛm bi dze ayɛ nhwehwɛmu.
Ɔboa hɔn a wonya dwumadzi wɔ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu no mu no. Ahendzi Asa do nwomakorabea yi botum aboa wo yie aber a irisiesie wo dwumadzi ahorow no. Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu do hwɛfo no na ɔhwɛ nwomakorabea yi do. Ɔyɛ n’asodzi dɛ ɔbɔhwɛ dɛ nwoma ahorow a wɔaba fofor no bi wɔ hɔ, na ɔhwɛ dɛ wɔahyehyɛ nwoma ahorow no so kama. Ɔno anaa wo Bible kyerɛkyerɛfo no botum aboa wo ma eehu dza epɛ dɛ ehwehwɛ no. Naaso, ɔnnsɛ dɛ wɔfa nwoma biara a ɔwɔ nwomakorabea hɔ no fi Ahendzi Asa no do. Afei so, yɛpɛ dɛ yɛhwɛ nwoma ahorow yi yie na yɛannkyerɛkyerɛw mu.
Bible no kã dɛ sɛ yebohu “Nyame no ho nyimdzee” a, ɔwɔ dɛ yenya ɔpɛ dɛ yɛbɔhwehwɛ “no dɛ akoradze a ohuntsa.” (Mbɛbusɛm 2:1-5) Ahendzi Asa nwomakorabea no botum aboa wo ma aahyɛ ase ahwehwɛ dɛm nyimdzee yi.
Ebɛn ndwindadze ahorow a wɔdze yɛ nhwehwɛmu na ibi wɔ Ahendzi Asa nwomakorabea hɔ?
Woananom na wobotum aboa wo ma eenya nwomakorabea no do mfaso yie?
Sɛ ebɛpɛ dɛ wankasa hyehyɛ wo nwomakorabea a, kɔ beebi a wɔgye nwoma no na kɔhwɛ nwoma ahorow a ibotum enya. Wo Bible kyerɛkyerɛfo no botum akyerɛ wo nwoma ahorow a ɔsɛ dɛ idzi kan nya.
Ebɛn Mfaso na Inya Fi Ahendzi Asa Nwomakorabea no Do?